လိပ်ပုအသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆန်က မျက်လည့်ပြတတ်လို့လား ဒါမှမုတ် သီချင်းဆိုပြနေလို့ အင်္ဂလန်လူစာရင်းမှာ ထည့်တာလားဆိုပီး ခနဲ့လိုက်တဲ့ ရွိင်ကိန်း – FBV SPORT NEWS
လိပ်ပုအသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆန်က မျက်လည့်ပြတတ်လို့လား ဒါမှမုတ် သီချင်းဆိုပြနေလို့ အင်္ဂလန်လူစာရင်းမှာ ထည့်တာလားဆိုပီး ခနဲ့လိုက်တဲ့ ရွိင်ကိန်း
အင်္ဂလန်နည်းပြဆောက်ဂိတ်ကတော့ ဒီနှစ် ယူရိုမှာ လူစာရင်းကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးယူနိက်တက်ကစားသမားဟောင်းကြီးတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်။
တစ်နေ့ကမှ ကြံခိုင်မှုမပြည့်ဝသေးတဲ့ မက်ဂွိုင်းယားကိုထည့်ခဲ့လို့ ဖာဒီနန်က ဆောက်ဂိတ်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လုရှောနဲ့ပက်သက်ပြီး ရွိင်ကိန်းကတော့ အင်္ဂလန်ရဲ့ ပထမဦးစားပေးရွေးချယ်မှုမှာ ယူနိက်တက်မှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတဲ့ လုရှောကိုချဲလ်ဆီးအသင်းကချီဝဲလ်ထက်ဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ရွိင်ကိန်းကယုံကြည်နေတာပါ။
ရှောဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ယူနိက်တက်မှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြသထားပြီး ယူရို၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲမှာတော့ တစ်နေ့က ရိုမေးနီးယားနဲ့ပွဲမှာ အင်္ဂလန်က ၁ဂိုး ဇီးရိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကမှ ပထမဆုံးပါဝင်လာတာပါ။
“ပထမဆုံးပွဲမှာတည်းက ရှောကိုရွေးကိုရွေးချယ်သင့်တယ်”လို့သရဲနီတပ်သားဟောင်းကြီးကITV Newsကိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့သောအားကစားပရိတ်သတ်တွေကတော့ ရှောနဲ့တခြားနောက်ခံကစားသမားတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးငြင်းဖွယ်ကောင်းငြင်းဖွယ်မယ်လို့သူထင်ပေမယ့် ရှောကချီဝဲလ်ထက်သာတယ်လို့ ရွိင်ကိန်းကခံစားခဲ့ရလို့ ခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ရွိင်ကိန်းက လိပ်ပုအသင်းခေါင်းဆောင် အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဟန်ဒါဆန်ကို လစာရင်းထဲထည့်ခဲ့တာနဲ့ပက်သက်ပြီးခနဲ့တဲ့တဲ့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
“သူ့အနေနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာ မပါသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။လူတွေကတော့ သူ့ကိုရှိစေချင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးပါတယ်။ဘာအတွက်လဲ? သူကမျက်လှည့်ပြတတ်လို့လား၊ သီချင်းဆိုပြလို့လား? ဒါမှမဟုတ်ညနေတိုင်း ပဟေဋိလုပ်ပြလို့လား?”ဆိုပြီးရွိင်ကိန်းကဆိုပါတယ်။
ကစားသမားဟောင်းကြီးတွေဝေဖန်သလိုပါပဲ တစ်နေ့က အင်္ဂလန်နဲ့ရိုမေးနီးယားနဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာကပြန်လာတဲ့ ဟန်ဒါဆန်ဟာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပယ်နတီကိုတောင်လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိက်တက်က ဆိုဒ်ပိလေးရက်စဖို့ကတော့ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့ ပယ်နတီတစ်ဂိုးသွင်းယူပြီး ရိုမေးနီးယားကို အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပြဆောက်ဂိတ်ကိုအင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆန်နဲ့ ယူနိက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားတို့ကို ယူရို၂၀၂၀မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တာနဲ့ပက်သက်ပြီး “ဆောက်ဂိတ်ဘယ်လိုဦးနှောက်မျိုးနဲ့စဉ်းစားခဲ့လဲ မသိဘူး”ဆိုပြီး
အင်္ဂလန်အသင်းကနည်းပြဆောက်ဂိတ်အနေနဲ့ကတော့ လူစာရင်းကိစ္စဟာ ခေါင်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတော့ နည်းပြဆောက်ဂိတ်ဟာ သူ့ရဲ့ ၂၆ယောက်လူစာရင်းမှာ မန်စီးတီး မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ကစားသမားတော်တော်များများကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။